Hongria: Ady no niafaran’ny fihenjanana teo amin’ny Hongroà sy ny Rôma Tao Gyöngyöspata · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Avrily 2011 5:00 GMT
Vakio amin'ny teny Español, polski, Français, русский, 繁體中文, 简体中文, Italiano, English
Halina, olona efatra no naratra nandritra ny fifanandrinana teo amin'ny foko Hongroà mpikambana ao amin'ny vondrona farany ankavanana Véderő sy ny fokonolona Rôma ao Gyöngyöspata. Efa nihahenjana ny toe-draharaha tao amin'ity tanànakely avaratr'i Hongria ity hatramin'ny volana marsa. Nialoha ny Zoma teo dia efa nanao sarinady mandranitra ady ny Véderő izay fanitsakitsahana ny fandriampahalemana misy eo amin'ny Rôma monina ao an-toerana sy ny fokonolona Hongroà.
Ny Bolongana Gyöngyöspata Solidarity dia nizara ny dikan-dahatsoratra voasoratra ao amin'ny vaovao notaterin'ny index.hu (HUN). János Ladó avy ao amin'ny Fiarovana ny Zo ara-tsivilin'ny Rôma dia nilaza tamin'ny index.hu fa ny Hongroà no nihantsy ny fokonolona Rôma nandritra ny tontolo andro ka tonga hatramin'ny fifandonana izany:
Gábor Vona, filohan'ny antoko farany havanana Jobbik ao amin'ny anteimieram-pirenena Hongroà, dia nitsikera ny fomba nataon'ny minisitry ny atitany, Sándor Pintér, tamin'ny toe-draharaha tany avaratr'i Hongria, ary nitaky ny fialan'ny minisitra noho ny tsy nahafahany niaro ny olom-pirenena Hongroà tamin'ny Roma izay “mifehy ny tanàna iray manontolo, indrindra ny antitra, ao anaty horohoro hatrany.”
Egyenlítő blog indray nitatitra fa nanasa ny Praiminisitra Viktor Orbán Atoa Vona hiresaka momba ny fifandraisana eo amin'ny Hongroà sy ny Rôma. Henjakenjana ny fehin-kevitra navoakan'ny mpamaham-bolongana tao amin'ny lahatsorany (HUN):
Makedonia 5 ora izay